Zava-mahaliana momba ny Gallium | Ny zavatra mahaliana momba ny singa simika
Gallium no singa 31st ao amin'ny Tabilao Periodic System nambaran'ny mpahay simia Rosiana sy mpamorona, Dimitri Mendeev, izay namorona ny elanelam-potoana. Nomeny anarana hoe eka - aluminium ny singa very satria fantany fa hianjera eo ambanin'ny aliminioma ao amin'ny Tabilao Periodika ao amin'ny sela 31. Ireto misy zava-misy mahaliana 10 momba ny galium - ilay singa nantsoina hoe akoho frantsay.
Ny toerana misy ny gallium amin'ny latabatra rafitra maharitra.
10 zava-misy mahaliana momba an'i Gallium
1. Tamin'ny 1875, Lecoq De Boisbaudran dia nahita sy nanokana gallium madio avy tamin'ny tsipika spectral roa volomparasy tao anaty santionana sphalerite tamin'ny alàlan'ny electrolysis of hydroxides. Na izany aza, naminavina ny fisian'io singa io ny mpahay simia Dmitri Mendeleev tamin'ny 1871, nanolotra ny anaran'ilay singa "eka - aluminium" avy amin'ny toerany eo amin'ny latabatra maharitra.
Gallium dia vy volafotsy iridescent.
2. Nomen'i Lecoq De Boisbaudran an'ity singa faha-31 ity ho "galia" ho fanomezam-boninahitra ny tanindrazany, France. Gallia no anarana latina an'ny Gaul. Ny sasany milaza ihany koa fa ny anaran'i Lecoq De Boisbaudran dia filalaovana teny, manome ny anarany manokana ary koa France. "Le coq" no teny frantsay midika hoe "akoho", raha ny teny latinina hoe "akoho" dia "galus". Ny singa dia avy eo nantsoina hoe gallium aorin'ny tovana -ium ho an'ny singa metaly.
Lecoq De Boisbaudran dia nantsoina hoe "galia" an'ity singa faha-31 ity ho fanomezam-boninahitra ny tanindrazany any Frantsa, ary i Gallia no anarana latina ho an'i Gaul. "Le coq" no teny frantsay midika hoe "akoho", raha ny teny latinina hoe "akoho" dia "galus".
3. Raha ny tena izy, tsy manana anjara toerana amin'ny biolojia olombelona i Gallium ary koa ny biby sy ny zava-maniry. Izy io dia vy madio izay heverina ho tsy misy poizina.
4. Amin'ny fitsaboana, ny gallium dia ampiasaina hanaraha-maso ny fivontosana sy ny fivontosana ny fivontosana. Ity singa ity dia manana fananana miady amin'ny homamiadana, indrindra manohitra ny lymphoma sy ny homamiadana tsy Hodgkin. Ny amine gallium amine - phenol dia poizina be amin'ny katôly malaria, ao anatin'izany ireo izay mahazaka chloroquine.
5. Ny Gallium dia azo atsonika mora amin'ny felatanana na zava-pisotro mafana.
Ny Gallium dia azo atsonika mora amin'ny felatanana na zava-pisotro mafana.
6. Hanitatra i Gallium rehefa mangatsiaka. Ny Gallium dia tsy tokony tahirizina anaty fitoeran-by vy na fitaratra, satria afaka vaky izy ireo rehefa mihalehibe ny gallium.
7. Ny Neutrino Observatory any Italia dia mampiasa gallium trichloride be dia be handinihana neutrino vokarin'ny masoandro. Neutrinos dia sombin-javatra noforonina tao amin'ny segondra voalohany tamin'izao rehetra izao - na dia talohan'ny ataoma aza - ary novokarina tamin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra niokleary an'ny masoandro sy ny kintana hafa.
Ny Neutrino Observatory any Italia dia mampiasa gallium trichloride be dia be handinihana ireo neutrino vokarin'ny masoandro.
8. Ny gallium gallium dia mamorona fitaratra manokana satria ny singa dia afaka manadihady sehatra ambonimbony. Gallium manenika vera, feso, ary na dia ny hoditry ny olombelona aza.
9. Gallium arsenide dia ampiasaina hamokarana LED manga manjelanjelatra.
10. Mihoatra ny 95% ny galium no ampiasaina amin'ny indostria semiconductor. Ny gallium madio dia manohitra ny fanafihana asidra mineraly. Ny sosona oksida miforona amin'ny tany dia miaro ny atitany.
Maherin'ny 95% ny gallium no ampiasaina amin'ny indostria semiconductor.
Mila mamboraka, manamaivana ny sainao, avelao YL Saribakoly manampy anao
Zava-misy mahaliana momba ny helium Zava-misy mahaliana momba ny lithium Zava-mahaliana momba ny Beryllium Zava-misy mahaliana momba an'i Carbon Zava-mahaliana momba ny Nitrogen Zava-mahaliana momba ny Oksizena Zava-mahaliana momba an'i Neon Zava-mahaliana momba ny flluorine Zava-misy mahaliana momba ny chromium Zava-misy mahaliana momba ny vy varahina Zava-mahaliana momba ny Zinc Zava-misy mahaliana momba an'i Nickel Zava-misy mahaliana momba ny Cobalt Zava-misy mahaliana momba ny vy Zava-mahaliana momba ny Manganese Zava-misy mahaliana momba an'i Vanadium Zava-misy mahaliana momba an'i Titan Zava-mahaliana momba ny Scandium Zava-misy mahaliana momba ny kalsioma Zava-misy mahaliana momba ny hidrogen - singa maivana indrindra amin'ny latabatra maharitra.